Akanakisa nharembozha | Sevha IZVO pane yako bhiri | Gadget nhau
Akanakisa nharembozha anowanikwa mumusika
Pasina nguva refu yapfuura, chero mushandisi wefoni mbozha aigona kusarudza pakati pevashoma nharembozha, idzo kazhinji dzaive dzakafanana uye dzataifanira kubhadhara yakawanda mari. Neraki, zvese zvakachinja zvakanyanya nekufamba kwenguva uye nhasi huwandu hwakanaka hwevashandisi venhare varipo mumusika uyo unotipa huwandu hwakawanda hwehuwandu hwemasero. Mimwe yakachipa kwazvo, iyo ine misiyano mikuru pakati pavo uye zvakare nemitengo yakasiyana kwazvo. Kuti tiite izvi nhasi tichaita fananidzo inonakidza pakati pavo vese. Sezvo zvichinetsa kutanga kumwe kunhu, tichazviita nekudzokorora matatu epamusoro mareti atinogona kuhaya izvozvi:
Mari yakachipa kwazvo: 8GB yesimo ye € 5
Chiyero chakazara kwazvo: 15GB uye isina muganho Mhandara Telco ye € 9 chete
Iyo yakanakisa nhare mbozha: 25GB uye zvisingagumi finetwork ye € 14,90 chete
Munyika yedu kuchine vashandisi vatatu vakuru vakaita saMovistar, Vodafone neOrange, vachiteverwa nechekure neyekare yakadai seMásMóvil (rangarira kuti yakawana Yoigo kupa kukurudzira kwakakosha) uye ichangoburwa Mhandara Telco yakatsigirwa incursion yenyika neboka reEuskaltel. Pakati peizvi isu tine vanonzi vanoshanda chaiwo vanotipa zvinonakidza uye zvakachipa mitengo.
Rate Gadzira Yako Yako Rate 10GB Simyo 10GB € 6 / mwedzi
Chiyero 14.95 Amena 20GB uye isina muganho. € 14.95 / mwedzi
Chiyero Plus 8GB risingagumi kufona uye 8GB € 8.90 / mwedzi
La SinFin Rate risingagumi data uye risingaperi mafoni € 35 / mwedzi
Enda Pamusoro peOrange rate Unlimited data uye risingaperi mafoni € 35.95 / mwedzi
Kana iwe uri kufunga nezvekuchinja anoshanda kana kuchinja mwero, gara nesu nekuti Muchikamu chino tiri kuzokuratidza zvakachipa uye kwete zvakachipa kwazvo nharembozha inowanikwa mumusika.
Parizvino nhare dzemafoni e Yoigo Ivo ndevamwe vanokwezva pamusika, kunyanya nekuda kwenhamba hombe yeGG yavanopa kune vashandisi, pamitengo yakaderera. Vazhinji vashandisi vanotsvaga netiweki yemasaiti kwenguva yakareba, dzimwe nguva vachida kushomeka uye kushaya mafoni uye vachida zvimwe zvakawanda kuti vawane dhata rekushandisa WhatsApp, Facebook kana chimwe chezvimwe zvinoshandiswa zvinoda kuve zvakabatana neInternet zvachose.
Yoigo akakwanisa kutora ichi chinodiwa chevaya vese vashandisi vasingakwanise kupererwa nema megabytes mune yavo data data. Muchokwadi, iwe unonyatso ziva mari yaro inonyanya kuzivikanwa: La SinFín. Iyi mwero ine risingaperi GB yekufamba neyako nhare uye, mukuwedzera, ine isina muganho mafoni. SinFín de Yoigo ndeimwe yemitengo mishoma inopa huwandu hwakakura hwegigabytes yekushandisa kwe € 35 / mwedzi. Kana iwe uchida kutora mukana wekudzikiswa mumari yako yemwedzi wega unogona zviite kubva pano.
Mumwedzi mishoma MásMóvil yabva pakuva kambani isina kuvapo kwakanyanya mumusika sevashandisi venhare kuenda kune kuva wechina Spanish opareta, nekutenga Yoigo.
Chiyero cheMásMóvil chakakamurwa kuita maviri: Mitengo yakatogadzirirwa naO Operator uye nemitengo iwe yaunogona kumisikidza nezvaunoda. Zvirongwa izvo MásMóvil zvinotipa zviri zviviri: 8 GB uye zvisingagumi kufona kwe € 8,90 kwemwedzi mitatu yekutanga uye 20GB ine mafoni asingagumi e € 14,90.
Unlimited mafoni ndiwo akajairika dhinominesheni yeMásMóvil akatogadzirirwa mitengo. Asi kana iwe uri munhu anofambisa kupfuura kutaura kune yako nhare mbozha, sarudzo yakanakisa kwauri ndeyekugadzirisa yako chiyero kuyera. Nenzira iyi, unogona kuwedzera huwandu hwakawanda hwegigs (20GB) uye unosheedzera pamasendi 0 paminiti. Uine gadziriso iyi iwe unozogona kusevha mashoma euros uchienzaniswa neiyo iyo MásMóvil yatove ne8GB.
Bvumirana chero eaya maitirwo nekudzvanya apa.
Orenji parizvino ari mubhidha rakaoma pamwe chete neVodafone kuve nerombo rekuve wechipiri nharembozha pamusika. Kune izvi zvaita kuvandudzwa kwemitero yayo yose munguva dzichangopfuura, zvichikonzera katarogu yeakanyanya kuwanda uye anonakidza. Mushure memakore manomwe hatichawani mari inozivikanwa yemhuka, asi isu tapa nzira kune iyo Enda mitengo.
Vashandisi vanoda zvakanyanya maererano neuwandu uye mhando vane mhanza, nekuti maGo rates anopindura chaizvo kune iwo mapoinzi. Mupfungwa iyi, Orange inotipa iwo mareti Enda Kumusoro uye Enda Kumusoro, iyo yese iine data risingaperi, mutsauko wechipo chega chega unowanikwa mukugona kuona zvirimo zvemhando yepamusoro (imwe muHD uye imwe yakasvika 4K) uye zvese zvine mafoni asingagumi.
Asi iwo mareti ane akawanda gigabytes ekufamba nawo haasi evateereri vese uye chiri chinhu icho Orange yafunga nezvacho. Neichi chikonzero chakafanana, inopa mamwe matatu mareti ane mashoma magigs: Zvakakosha, Go Flexible uye Vana. Neakakosha, Orange inotipa 7GB uye inoshevedza pamasendi 0 e € 14,95 / mwedzi. YeOrange's Go Flexible rate inotipa mukana wekuve ne16,67GB uye zvisingagumi kufona kwe € 24,95 / mwedzi. Chekupedzisira, iyo rate yeVana ine internet ine inosvika ku2GB ye € 8,95 / mwedzi uye inoenderana nemapiritsi ako kana malaptop. Kana iwe uchifarira Go de Orange mitengo, unogona vatore kubva pano nyore.
Iyo tsvuku kambani ndeimwe yeakakura mukati medunhu reSpain uye izvozve zvinotipawo akati wandei mbozhanhare-chete mareti. SaOrange kana Movistar, Vodafone inotipa mhando dzese dzemitengo, iine hunhu hwakasiyana uye nemitengo yemarudzi ese.
Iyo yakatsvuka-kambani kambani inosvika kune ese marudzi evashandisi, kubva kune avo vanoshandisa zvakanyanya megabytes uye maminetsi kune avo vasingatombo bvisa imwe kana iyo imwe. Saka, isu tine Mobile Mini, isingagumi, isina muganho Maxi uye isingagumi yakazara kune avo vanodya zvakawanda maererano ne data uye maminetsi ezwi.
Kune avo vanotaura zvakanyanya uye vanoshandisa data, Vodafone inopa Unlimited yakazara GB isina muGG, maminetsi asina muganho. Zvese zve € 5 / mwedzi. Iyo yepakati mwero ndiyo Unlimited Maxi nzira ine risingaperi GB mu47,99G + network, maminetsi asingagumi. Zvese izvi zve € 4 / mwedzi. Chekupedzisira, iyo isina muganho ndeye kupihwa ine risingagumi data mu36,99G network (yakanyanya kurodha kumhanyisa 4Mbps) uye maminetsi asingagumi e € 2 pamwedzi.
Kana iwe uchifarira Vodafone nharembozha, unogona kuvashandira mumaminitsi asingasviki matatu kubva pano.
Movistar kana chii chakafanana, iyo yekare Telefónica ndiyo inodzora musika wefoni mbozhanhare, nekuda kwekufukidzwa kwayo kwakanaka munenge chero kona yenyika yedu uye nebasa rakanaka rainopa vatengi vayo. Nehurombo mitengo yavo haina kudzika sezvaizodairwa nevazhinji vedu.
Seizvo vamwe vashandisi vaita, Movistar akagadzirisawo yayo mobile rate kupihwa, kunyangwe zvisiri zvakanyanya sezvakaita Orange. Mune ino pfungwa, Movistar anotipa isu nemitengo mitatu, mune iyo hombe gigabytes inomira.
La Movistar chibvumirano 2 chiyero Inogona kuverengerwa se "basic rate", nekuti inotipa 5GB yekufamba nharembozha yedu uye maminetsi makumi mashanu mukufona kwe € 50 / mwedzi. Kana isu tikakwira mudanho reMovistar, mwero unotevera ndicho Chibvumirano cheXL icho chinotipa 15GB nemaminetsi asingagumi ekufona kune nhare uye nhare dze € 15 pamwedzi. Yekupedzisira emitengo, chibvumirano chisingaperi, ine GB risingagumi, maminetsi uye maSMS pamutengo we € 24,95 / mwedzi.
Mumwe weanoshanda oparesheni uyo aigona kushaikwa kubva pane urwu runyorwa ndi Pepephone izvo zvinotipa mamwe emakwikwi emitengo, muzvinhu zvese zvatingawana mumusika. Kunyanya, inotipa Mitengo mitatu iri kukwikwidza kwazvo zvine chekuita nemusika wese. Nenzira iyi, isu tinowana iyo yekutanga mwero iyo inosanganisira 5GB uye isina muganho mafoni e € 7,90 / mwedzi. Iyo yepakati mwero inotipa 10GB uye maminetsi asingagumi e € 11,90 pamwedzi.
Chekupedzisira, isu tinowana iyo inogona kunge iri iyo inobatsira kwazvo chiyero: 39GB uye isina muganho maminetsi ekufona kwe € 19,90 / mwedzi.
Hongu shamwari, Amena adzoka. Iyo green opareta yaiperekedza vazhinji vedu panguva iyoyo uye, isu taigona kutaura, kuti ndeyemhando yepamusoro kana zvasvika kune nhare mbozha. Amena adzoka kuhupenyu neOrange uye mitengo yayo inoshamisa. Uyu mushandisi akafanana nekugadzirisa uye vanonyatsozviratidza nemitengo yavo. Zvirongwa zvaro zvekufambisa zvinotarisa pamhando yega yega yemushandisi: chiyero chimwe cheavo vanoshandisa nharembozha yavo, imwe yeavo vanotaura zvishoma uye maviri kune avo vanoda zvese. Mitengo mina inoshamisa.
Chiyero chekutanga ndechevaya vasingatombo shandisa foni yavo kunze kwemusha. Amena akafunga nezvavo uye anovapa 4GB, anodana pa0 cents paminiti uye SMS isina muganho ye € 6,95 / mwedzi. Asi kana iwe ukataura zvishoma kubva kunharembozha yako, iwe ungangodaro uchifarira muyero ne10GB, maminetsi asingagumi uye SMS isina muganho ye € 9,95 pamwedzi.
Iyo yakasvibira kambani inokupa iwe nhare mbozha ine 25GB, zvisingagumi mafoni uye maSMS e € 19,95 / mwedzi. Asi kana 10GB isina kukwana kwauri, chirongwa chazvino chichafadza iwe zvakanyanya. Iyo yekupedzisira mwero inokupa iwe 30GB, zvisingagumi mafoni uye maSMS e24,95 / mwedzi.
Isu tinoziva kuti zvakaoma kwazvo kusarudza iyo Amena rate, nekuti ivo vakanaka chaizvo. Kana iwe usati uchisarudza, mune iyi link unogona kuwana rumwe ruzivo.
Orange yaSimo haisi tsaona uye iyi zvakare ikambani iri yeboka reOrange. Nekudaro, Simyo ine yakasarudzika uye inoshanda yakasarudzika ficha: unogona kugadzira yako mwero. Iwe unogona kumisikidza chirongwa chako uine yakawanda kana shoma data uye neakawanda kana mashoma izwi maminetsi. Zvaunoda iwe.
Ndisati ndatsanangura mashandisiro anoita mwero yekugadzirisa, ini ndoda kukuudza nezvemitengo iyo Simyo yatokupa iwe yawakagadzirirwa. Iyo kambani inotipa isu nemitengo mina yatinogona kubvumirana. Tine mahara pasina quota, ndiko kuti, 0 euros. Tine mini rate inosanganisira maminetsi makumi maviri ekufona uye 20MB ye € 100 pamwedzi. Chiyero chakaringana cheWhatsApp nemaminetsi makumi mashanu ekufona uye 2MB ye € 50 / mwedzi. Uye yekupedzisira preset ndeyeavo vanotaura uye kufuridza zvakawanda. Izvi zvinotipa maminetsi zana uye 100GB ye € 3,5 pamwedzi.
Kana pasina chimwe chezviyero zviri pamusoro ichi chakugutsa, yeuka kuti iwe unogona kugadzira yako nenzira yakapusa. Chinhu chekutanga chauchazofanira kusarudza i data rekufamba nharembozha yako. Iwe haugone kusarudza data kuti utarise, asi iyo yakanyanya 40GB. Gare gare, unofanirwa kusarudza iyo maminetsi ekufona, kubva pa0 maminetsi kusvika parinogumira mafoni. Kurudziro yedu, mune ino kesi, iri pachena: gadzira yako wega chiyero. Hapana chinhu chiri nani pane kugona kusarudza izvo zvaunoda kushandisa maererano nedata uye maminetsi ezwi. Nekudaro, kana iwe uchida kuona mamwe ese mikana iyo Simyo inopa, pinda apa.
Lowi imwe yemakambani efoni mbozha anokosheswa zvakanyanya nevashandisi, nekuda kwemitengo yayo yakachipa uye mukana wekugadzira iyo mwero zvachose kune zvatinoda. Iwe unogona kuve nekugadzirisa yako rate kubva ku8GB kusvika ku30GB yedata pane yako nhare uye, maererano nemaminetsi ezwi, vese vane mafoni asingagumi.
Kana isu tichifanira kugara neimwe yemitero yavo, iyo pasina mubvunzo ichava Yako mwero ne8GB ye € 7,95 pamwedzi. Mutengo wakakwikwidza uye unbeatable. Iwe unogona kuona zvimwe zvese zvinogoneka chiyero masetingi uye hunhu kubva pano.
Ndeupi mwero wawakawana chibvumirano parizvino uye ndeupi waungachinje kana uchikwanisa? Sezvawaona, mikana yacho haina magumo uye zvese zvinoenderana newe. Usagadzike uye gara wakatarisana neichi chinyaradzo nekuti tichachigadzirisa mwedzi wega wega. Uye kana usati wawana yako yakakwana rate pano, unogona kugara uchishandisa iyo Roams telephony muenzanisi kuti uwane yakanakisa sarudzo iyo inokutendera iwe kusevha.